မန္တလေး ခုနစ်မြို့နယ်တွင် သက်ငယ် မုဒိမ်းလျော့နည်း ပပျောက်ရေးနှင့် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ် ချမှတ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး ခုနစ်မြို့နယ်တွင် သက်ငယ် မုဒိမ်းလျော့နည်း ပပျောက်ရေးနှင့် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ် ချမှတ??
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးမြို့ခုနစ် မြို့နယ်တွင် သက်ငယ်မုဒိမ်းလျော့နည်းပပျောက်ရေးနှင့် ကြီးလေး သော ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးရေး လက်ကမ်းစာစောင်ကမ်ပိန်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ မန္တလေးပရဟိတအဖွဲ့များနှင့် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်း၍ ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နံနက် ၆ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေက တစ်နေ့တခြားပိုပိုပြီး များလာသလို ဆိုးရွားလာတယ်။ လျော့နည်းသွားအောင်နဲ့ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးဖို့ မန္တလေးကပရဟိတ အဖွဲ့တွေ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေ စုပေါင်းပြီး မိဘနဲ့ကလေးငယ်တွေကို အသိပညာပေးဖို့ အခုလိုလက်ကမ်းစာစောင်တွေ လုပ်ပြီးအသိပညာပေးနေတာပါ”ဟု မန္တလေးအနာဂတ်လှပစေချင်သူများအဖွဲ့ဦး ဆောင်သူ ဦးဝမ်းကပြောသည်။ မန္တလေးခရိုင်အတွင်းရှိ အောင်မြေသာစံ၊ ချမ်းအေးသာစံ ၊ မဟာအောင်မြေ၊ ချမ်းမြသာစည်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်၊ အမရပူရနှင့် ပုသိမ်ကြီးစသော မြို့နယ်များရှိ အထင်ကရနေရာများ၊ ဈေးများနှင့် မူကြိုများတွင် မန္တလေးမြို့ခံပရဟိတ အဖွဲ့များနှင့် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ များပူးပေါင်းထားသော အနာဂတ် လှပစေချင်သူများအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ လက်ကမ်းစာစောင် ၂၈ဝဝဝ ကို ဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နှင့် ၂၅ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့မနော်ရ မံ္မလူထုဟစ်တိုင်ကွင်း၌ ဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုများ ကာကွယ်ရေးအတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များ ပြသခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်တီရေးဆွဲခြင်း၊ မျက်လှည့်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းများပြုလုပ် ကြမည်ဖြစ်သည့်အပြင် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူများကို ကြီးလေး သော ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်အတွက်လည်း ပြည်သူလူထုထံ လက်မှတ်များ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းမေးမြန်းရန် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်သို့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရမှတစ်ဆင့် တင်ပြသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။